Lazio Oo Wadahadallo Kula Jirta Torreira – Garsoore Sports
Lazio Oo Wadahadallo…
Kooxda Lazio ayaa xiiseyneysa saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira, sida laga soo xigtay Sky Italy.
Torreira kuma uusan xasilin Emirates Stadium, inkasta oo uu si xoogan ugu bilawday nolosha kooxda. Markii amaah loogu diray Atletico Madrid ololihii 2020/21, wuxuu hadda ku laaban doonaa kooxda leh Milkiyaddiisa ee Arsenal.
Malaha muddo dheer, inkasta, sida Sky Italy ay ku warramayso in Lazio, oo hadda uu maamulo macallinkii hore ee Chelsea, Maurizio Sarri, ay wadahadalo kula jiraan wakiilka Torreira si ay suurtogal ugu noqoto inuu u dhaqaaqo magaalada Rome xagaagan.
Ka tagista Torreira waxay ka caawineysaa macalinka Gunners Mikel Arteta inuu lacag u helo si uu ula soo saxiixdo kubbadsameeye tayo sarreeya, halkaasoo loo arko inuu yahay boos ay tahay mudnaanta koowaad inay iska xoojiso kooxda ka dhisan Waqooyiga London xagaagan.
Deschamps Miyuu Ku Wareeray Xulka Faransiiska?